KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bosnian Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Drehu Dutch Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Gitonga Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Itsekiri Japanese Japanese Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mari Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Sãotomense Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Yehowa Adansefo ne nkurɔfo sua Bible, na ɛma wonya nsɛmmisa bebree ho mmuae. Ebi ne nea edidi so yi:
Ɛyɛ ampa sɛ Onyankopɔn dwen me ho?
Dɛn na mɛyɛ ama m’aware asɔ?
Mɛyɛ dɛn na m’ani agye?
Bible a yɛne nkurɔfo sua no, wohwɛ ase ha a, wubehu nsɛm a nkurɔfo taa bisa fa ho, ne ɛho mmuae.
Mo ne obi resua Bible a, moyɛ no sɛn? Yɛfa asɛm bi te sɛ “Onyankopɔn” anaa “aware” a, na yɛahwɛ Bible nsɛm ahorow a ɛfa ho. Afei, yɛhwɛ nea ebiara ka wɔ ho. Ɛno ma yehu nea Bible no nyinaa ka fa asɛm no ho. Yɛyɛ no saa a, na Bible no ara na ɛrekasa ma ne ho.
Yɛde nhoma a ne din de Dɛn na Yebetumi Asua Afi Bible Mu? na esua Bible no. Nhoma no ma yehu nea Bible ka pɔtee fa nsɛm pii ho. Ebi ne Onyankopɔn, Yesu, ne yɛn daakye.
Mo ne obi sua Bible a, mugye no sɛn? Yɛne wo sua Bible a, yɛrennye wo sika biara. Nhoma a yɛde bɛyɛ adesua no nso, yentwaa bo biara ntoo so.
Bere tenten sɛn na mode yɛ adesua no? Nnipa pii yi bɛyɛ dɔnhwerew baako si hɔ nnawɔtwe biara ne yɛn sua Bible. Nanso yenni bere tenten a yɛde yɛ adesua no. Nea wobɛka na yɛbɛyɛ.
Sɛ meka sɛ mo ne me mmesua Bible a, mobɛyɛ no sɛn? Woka sɛ yɛne wo mmesua Bible a, yɛbɛhwɛ bere a woakyerɛ ne baabi a wopɛ sɛ yɛne wo sua ade no na yɛama Yehowa Danseni bi aba wo nkyɛn. Ɔba a, ɔde bere kakra bɛkyerɛ wo sɛnea yɛyɛ Bible adesua no. Sɛ w’ani gye ho a, na moatoa so.
Sɛ me ne mo sua Bible a, ɛsɛ sɛ mebɛyɛ Yehowa Danseni anaa? Daabi. Yehowa Adansefo ani gye ho sɛ wɔne nkurɔfo besua Bible, nanso yɛnhyɛ obiara sɛ ɔmmra yɛn som mu. Mmom yɛtɔ yɛn bo ase ma nkurɔfo hu nea Bible ka. Yenim sɛ, sɛ obi begye biribi adi oo, ɔrennye nni oo, ɛno de, ɛwɔ ɔno ara ne nsam.—1 Petro 3:15.
Wubetumi Anya Anigye Daa!—Nhoma a Yɛde Fi Bible Mu Nkɔmmɔ Ase
Yɛahyɛ da ayɛ nhoma yi sɛ yɛde bɛboa nkurɔfo ama wɔafi ase asua Bible no a yɛrennye wɔn hwee.
Sua Bible wɔ bere ne baabi a eye ma wo; wuntua hwee.
Share Share Dɛn Ne Bible Adesua?
ijwfq ti 15
Sɛ Me ne Yehowa Adansefo Sua Bible a, Ɛsɛ sɛ Me Nso Mebɛyɛ Ɔdansefo Anaa?